Saxiixa cusub ee Apple TV + markan Jessie Henderson oo ka socda WarnerMedia | Wararka IPhone
Magaca Jessie Henderson ayaa laga yaabaa inuusan kugu habboonayn, laakiin wuxuu ku saabsan yahay madaxweyne ku xigeenkii hore ee WarnerMedia. Dareenkan, fulinta wuxuu qayb ka noqonayaa Apple TV + iyo kooxda taxanaha asalka ah ee Apple. Saxeexida waxaa lagu shaaciyey iyada oo la daabacayo Macluumaadka.
Waxay u muuqataa in Apple ay rabto inay sii xoojiso adeeggeeda fiidiyowga ee fiidiyowga ah sababtaas awgeedna waxay u adeegsanaysaa dhammaan ilaha la heli karo, laga soo saaro soosaarka taxanaha laftiisa, dokumentiyadii asalka ahaa, iibsashada xuquuqda qaar ka mid ah filimada xaraashka ah (iyagoo ka faa'iideysanaya xilligii safka si loogu sii daayo adeeggaaga) iyo si macquul ah saxiixa maamulayaasha khibrada u leh waaxda sida Henderson.
Taxanaha iyo soo saarista filimada ayaa sii kordheysa
Sida laga akhrisan karo warbixinta lagu daabacay Macluumaadka Apple waxay si adag u shaqeyneysaa inay ku darto waxyaabo badan oo ka mid ah adeegga qulqulka waana run in ay soo daahday oo ay suurtagal tahay hadda waqtiyada COVID-19 in aysan maraynin waqtiga ugu fiican ee arrintan la xiriira, in kasta oo ay run tahay in aan wada ognahay in Apple Waxaan si fudud ku bixin doonnaa waana sii wadi doonnaa raadinta iyo soo saarista taxanaha. Lacagta sidoo kale waxay leedahay saameyn macquul ah oo tan Apple ka badan ayaa ku filan.
Tartan la leh socodka fiidiyowga fiidiyowga ayaa ah mid adag oo ka sii daran marka ay jiraan kooxo waaweyn sida HBO, Netflix, iwm, laakiin Apple waxay sii wadaa inay sameyso wadadeeda. Xaaladdan oo kale, saxiixa Henderson ee shirkadda Cupertino wuxuu ku siin karaa khibrad waana taas, sidaan bilowgii faallo ka bixinay. Waxay u adeegtay inay noqoto kormeeraha filimka HBO Max. Saxiix cusub oo Apple TV + wax badan ku soo kordhin kara, shaki la’aan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Alaabada Apple » appleTV » Saxiixa cusub ee Apple TV + markan WarnerMedia's Jessie Henderson
Marka waad tijaabin kartaa interface-ka isticmaale ee Galaxy